2012 | ကြယ်ရောင်မှတ်စု
လူလားမြောက်နိုင်ပါစေ သူငယ်ချင်း။ ။
(ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို အပြီးပြန်သွားပြီဖြစ်သော သူငယ်ချင်းသို့ အမှတ်တရ)
Posted by ကြယ်ရောင်မှတ်စု at Wednesday, December 05, 20124comments
ကျွန်တော် အများကြီးမတောင်းတပါဘူး မေမေ...ရေတစ်ပေါက်စာလောက် အေးရရင်တော်ပါပြီ။ လူတွေအများကြီးထဲက တခါတခါ ကျွန်တော်ပျောက်နေတတ်တယ်။ တကယ်ကိုတစ်ယောက်ထည်း မျက်ရည်မိုးတွေ သည်းမိမယ်မေမေ။ ကျေးဇူးပြုပြီး ပွင့်အန်ထုတ်ခွင့်ပေးပါ။ ဘယ်ညာ မကြည့်ပါနဲ့ဘယ်ကမ္ဘာကမှ လာမကူဘူး။ ကျွန်တော်မညူစူမိပါဘူးမေမေ။ ဖြစ်နိုင်ရင်ရေလေးတစ်ခွက်ထည်းပါ။ နေ့ရက်တွေတိုင်းက အပြိုင်းအရိ်ုင်းဖူးပွင့်ကြတယ်။ ကျွန်တော်ဘာနဲ့နှိုင်းရပါ့။ စကားလုံးမဲ့တဲ့ကောင်းကင်တဲ့လား။ ကျွန်တော်မသိချင်ဘူး။ ပြန်ယူသွား ပြန်ယူသွား အဲဒီဂစ်တာကိုပြန်ယူသွား။ ကျွန်တော့ကို မိုးရေတောထဲထားခဲ့။ အရာရာရေငုံနှုပ်ပိတ် တခါးပိတ်ပြီး အိပ်လိုက်တော့။ လေးဖြူလည်းမသိချင်ဘူး ကိုရွေးရဲ့ ကြည်လင်သောရေတံခွန်လည်း ထားခဲ့လိုက်။ အလိုလိုက်တိုင်းလည်း ကျွန်တော် အမိုက်မစော်ကားခဲ့မိဘူး။ ကိုပိုင်စိုးဝေ ကျွန်တော်ခင်ဗျားကို လေးစားပါရဲ့။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့် ကြယ်တံခွန်က မူးမနေဘူး။ ထူးပဲနေတာ။ လာလာ သားလေး အနာတွေရေးဆေးလိုက်။ ကျေးဇူးပါမေမေ အနာဆိုတာ ဒီလိုကောင်အတွက် သာယာမှုမဟုတ်တောင်မှ ဓာတ်သက်ပါပြီးသားဖြစ်နေပြီ။ ဟူးးး ဘယ်လိုပြောပြော မမောတာခက်တယ်။ မြို့ပြက အနှစ်သာရမရှိဘူး မပြောနဲ့ ကျေးလက်က သာယာတယ်လို့လည်းမပြောနဲ့ အရာရာအားလုံးနဲ့ သဟဇာတမဖြစ်ဘူး မပြောနဲ့ ဘာဆိုဘာမှမပြောနဲ့ ဖြစ်နိုင်ရင် ကျွန်တော်ပါးစပ်ကို ဆွဲသာစိထားလိုက် ထိုအခိုက် ပန်းတို့လှိုင်လှိုင်ပွင့်လိမ့်မယ်။
Posted by ကြယ်ရောင်မှတ်စု at Friday, May 25, 20124comments
ကျွန်တော့်ကိုယ်ကျွန်တော် နည်းနည်းနဲ့ ကျဲကျဲပဲ လင်းခဲ့တယ်………
ချစ်သူက ဖြူစင်လွန်းလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပဲ ပြန်ဆေးခြယ်လိုက်တယ်
ဒီလိုနဲ့ပဲ ချစ်သူရဲ့ ဟေမာန်ဥတုထဲမှာ ကျွန်တော်ဟာ လူလုံးမကွဲဘူး…..
ကျွန်တော်ကတော့ ချစ်သူ့အကြောင်း ညတိုင်းတွေးတယ်
ချစ်သူရဲ့ အတွေးထဲမှာတော့ ကျွန်တော့် တစ်ကိုယ်စာ နေရာလေးအတွက်
ရုပ်သက်သက်ပဲရှိတဲ့ ချစ်သူရဲ့ အကိုင်းအခက်အချို့ကို
ကျွန်တော်တွဲလွဲ ခိုစီးတော့ ဂစ်တာလေးက ငိုချင်းချတယ်
ဒါကြောင့် ညညတွေဆို သံစဉ်တွေပြိုဆင်းကျတယ်……
ညက ချစ်သူကို အိမ်မက်မက်တယ်
ချစ်သူနဲ့ ကျွန်တော် ကြယ်တွေရဲ့ သံစဉ်နဲ့ လမျက်နှာပြင်ပေါ်တက်ပြီး
ပြိုးပြိုးပျက်ပျက် နှစ်ယောက်အတူ လင်းလက်ခဲ့တယ်
ပျော်လားလို့ ကျွန်တော်ကမေးတော့ ချစ်သူကပြုံးပြပြီး
ကျွန်တော့်နားကို စကားတိုးတိုး ကပ်ပြောတယ်
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ဘာမှမကြားခဲ့ရဘူး……..
ဒီလိုပါပဲ ထင်မှတ်မထားတာတွေ ဖြစ်တတ်လွန်းတော့
ကိုယ့်ကြမ္မာ ကိုယ်ပြန်မှင်တက်မိတဲ့အခါ ကျွန်တော်ဟာ ကျွန်တော်မဟုတ်သလိုပါပဲ…..
ချစ်သူကိုချစ်လွန်းလို့ ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော် နာကျင်စေမိပြန်တယ်
ဒါကြောင့် စိတ်ရူးစိတ်နှမ်းနဲ့ အတွေးတွေကိုထမ်းပြီး
ညညဆို ချစ်သူအကြောင်းကို ကလောင်တစ်ချောင်းနဲ့ ထုစစ်တော့
inspiration တွေကသွေးချင်းချင်းကျပြီး ကဗျာတစ်ပုဒ်ရပေါ့……..
ဒီနေ့တော့ ချစ်သူရဲ့ဗလာ ရယ်သံကြားမှာ ဦးနှောက်က ခပ်ဝါးဝါးပဲရှင်ပြီး
ကျွန်တော့်စိတ်ကို ကျွန်တော် သွားကြားပြန်ညှပ်နေလိုက်တယ်
ကျွန်တော့်ဘဝဟာ မှင်မပါပဲ အခြစ်ခံခဲ့ရတယ်
ဒီနေ့တော့ ချစ်သူငိုနေတယ် ကြိုတင်အကြောင်းမကြားပဲ
တိတ်ပါတော့ကလေးရယ် ဆိုပြီး ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော်ပြန်ချော့တယ်
ဒါကြောင့် ချစ်သူငိုရင် ကျွန်တော့်မိုးတိမ်တွေပါ ပြိုတယ်………
ညကချစ်သူက ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ပြောပြတော့ ကျွန်တော့်ဝမ်းသာမှု့တွေ စောတယ် အဲဒီညမှာ
ချစ်သူက အပြောအဟောကောင်းလို့ အဲဒီည စိတ်နဲ့ကိုယ်အကြောင်းအပေါင်း နည်းနည်းသင့်တယ်…….
ချစ်သူက တေးသွားတစ်ပုဒ်မှာ နှစ်ချိုက်တော့ ကျွန်တော့်မှာ ဘာတူရိယာမှမရှိလို့
ဘယ်သူကမှ ဂရမ်မီ ဆုမပေးသလို ကျွန်တော်တို့ကလည်း ခုနှစ်သံချီနဲ့ မဟစ်ကြွေးဘူး…….
ချစ်သူကို ကျွန်တော်ချစ်လွန်းလို့ သံစဉ်ညှိရင်း ကြိုးတွေတင်းခဲ့မိတယ်
ဒါကြောင့် ချစ်သူနဲ့ ကျွန်တော့်ကြား တေးသွားတွေမာကြောခဲ့ရတယ်…….
တကယ်တော့ ကျွန်တော်ဟာ ကြယ်တစ်ကောင်ရဲ့အလင်းနဲ့ အမှောင်မှာလမ်းလျှောက်ခြင်း သီအိုရီကိုလေ့လာဖို့
သင်ပုန်းကြီးမကြေတဲ့ ကလေးငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ မှတ်စုစာအုပ် သက်သက်ပါပဲ………….
ဒီလို့နဲ့ပေါ့ အချိန်သုံးပါးထဲမှာ ချစ်သူနဲ့ကျွန်တော် ချစ်သူတွေမဖြစ်ကြဘူး
အဲဒါကြောင့် နေ့ရက်တိုင်းမှာ ချစ်သူကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ အိပ်နေလိုက်တော့တယ်…….
ဟိုးအရင် ဆင်တဲ ဆိုဒ်မှာတင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကဗျာလေးပါ။ ကိုယ်တိုင်လည်းနှစ်သက်သလိုရှိတာနဲ့ ဒီဆိုဒ်မှာလည်း စာမရေးဖြစ်တာကြာနေတော့ အမှတ်တရပြန်တင်ဖြစ်သွားပါတယ်။
Posted by ကြယ်ရောင်မှတ်စု at Sunday, January 22, 20122comments